Qoraalka Dadka Aan Wax Akhrin | Martech Zone
Isniin, Maarso 28, 2011 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan ka jawaabey faallo Facebook ah (ok… waxay ahayd dood) qoraaga isla markiiba wuu ku jawaabay… "Marka waan oggol nahay!". Waxay iga dhigtay inaan dib u noqdo oo aan dib u akhriyo faallooyinkiisa. Waan ka xishooday markaan arko sida xun ee ra'yigaygu ugu jawaabayo midkiisa - gabi ahaanba waan seegay qodobadiisa muhiimka ah.
Goor dambe, waxaan ka helay faallo ku saabsan qoraalkayga oo i qarxiyay… laakiin dhab ahaan kuma kala duwanaanin ra'yigayga aan qoray. Xaqiiqdii waxay tilmaamaysaa arrin weyn oo ku saabsan shabakadda - dadku wax ma akhriyaan mar dambe. Maaha arrin caajisnimo mana aha doqonimo really Runtii waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii. Dadyowgu waxay gaaraan boggaaga, jaleecada, oo waxay soo gabagabeeyaan.
Runtii waxa ay tilmaamaysaa waa baahi loo qabo in fariimahaaga internetka loogu talagalay in loogu talagalay fahamka ugu badan. Boggaagu wuxuu u baahan yahay muuqaallo - sidoo kale sawirro ama muuqaal - si akhristayaashu u jaleecaan waxa ku jira, oo ay weheliso sawirka, oo ay si buuxda u hayaan macluumaadka aad isku dayeyso inaad ku gudbiso farriinta. Kuma filna in la qoro erey 500 erey ah mar dambe.
Waxaan kula talinayaa macaamiisha inay ku sameeyaan sharci labaad 2 boggooda. Hayso qof aan waligiis soo marin goobtaada kahor intaanad hoos u dhigin oo u iftiimin goobta iyaga 2 ilbidhiqsi buuxa.
Ma jiray farriin dhexe?
Ma hayeen wax macluumaad ah?
Ma garanayeen waxa xiga ee la sameeyo?
Maaha in qof kastaa uusan waqti qaadan - laakiin in badan ma qaataan. Kuwaas akhristayaasha ahna waxay noqon karaan musharax kufiican alaabadaada ama adeegyadaada.
Tags: commentsdukaan ku jirasuuq-geynta dukaankaoogwave